ऋण लगानीमा आक्रामक बन्दै बैंकहरु, एक महिनामै बढाए रु. १.१३ खर्बले कर्जा Bizshala -
ऋण लगानीमा आक्रामक बन्दै बैंकहरु, एक महिनामै बढाए रु. १.१३ खर्बले कर्जा
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीका सुस्ताएका बैंकहरु पछिल्लो समय निकै आक्रमक ढंगले अगाडि बढेका छन्।
पछिल्लो एक महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गतिलाई निकै तीव्रता दिएका छन्। यो अवधिमा बैंकको कुल कर्जा प्रवाह १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार माघ २ गतेसम्म बैंकहरुको कुल कर्जा प्रवाह ३२ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जब कि पुस ३ गतेसम्म बैंकहरुले कुल ३१ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए।
त्यसो त पछिल्लो एक सातामै बैंकहरुले ५१ अर्ब रुपैयाँले कर्जा प्रवाह बढाएका छन्। गत पुस २४ गतेसम्म कुल ३१ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुले माघ २ गतेसम्म आउँदा कर्जा प्रवाहलाई बढाएर ३२ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको उचाइमा पुर्याएका छन्।
कर्जासँगै बैंकहरुले निक्षेप संकलन पनि आक्रमण ढंगले बढाएका छन्। पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा बैंकहरुको कुल निक्षेप संकलन ६५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। गत पुस ३ गतेसम्म ३६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन रहेकोमा माघ २ गतेसम्म आइपुग्दा बढेर ३६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
पछिल्लो एक सातामा मात्रै बैंकहरुको कुल निक्षेप संकलन २४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। गत पुस २९ गतेसम्म बैंकहरु कुल निक्षेप संकलन ३६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा माघ २ गतेसम्म बढेर ३६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।
आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउन खोजिएपछि बोल्यो मेगा बैंक, ५
काठमाण्डौ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले हालै एक टेलिभिजनमा आफ्नो...
राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ र शिवाकोटीले पाए
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु शिवराज श्रेष्ठ र...
व्यापार विस्तारमा वाणिज्य बैंकहरु आक्रामक, फागुन मध्यसम्म
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका...